USB အမှားသတင်းစကား - ဒီ drive မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်
နေအိမ်/ညွှန်ကြားချက်/USB အမှားသတင်းစကား - ဒီ drive မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်
Vangelis17 ။ ဧပြီလ 2021
USB stick ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ error တက်တယ်“ ဒီ drive မှာပြဿနာရှိနေတယ်” ဆိုတဲ့ error message ပေါ်လာတယ်။ ဤ USB error message ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည့်အနေနှင့်ဤအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်တွင်
1 ဒီ drive မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်
2 “ ဒီ drive မှာပြဿနာရှိနေတယ်” ဆိုတဲ့ error message ကိုငါဘာလို့ရသလဲ။
3 ဤ drive တွင်အမှားများတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိုဖြေရှင်းပါ
4 Windows 10 နှင့်စစ်ဆေးစဉ်အမှား
5 Chkdsk command ဖြင့် USB ကိုပြုပြင်ပါ
6 ၎င်းကိုပြုပြင်ရန် USB drive ကိုပြဿနာရှာပါ
ဒီ drive မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်
Windows 10 အောက်တွင်၊ ချိတ်ဆက်သည့်အခါ တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်ခုပေါ်လာသည်။ USB ချောင်းပြင်ပ hard drive (သို့) SD card error message "ဒီ drive မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်" ဤအမှားသတင်းစကားသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ မကြာခဏဒီလိုလုပ်နိုင်တယ် အမှားပြစာ USB ကို သုံး၍ မရသောကြောင့်လည်းနှိပ်နိုင်သည်။
ဒီ drive မှာပြဿနာရှိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး drive ကိုအခုစစ်ဆေးပြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပါ။
“ ဒီ drive မှာပြဿနာရှိနေတယ်” ဆိုတဲ့ error message ကိုငါဘာလို့ရသလဲ။
ဤအမှားသတင်းစကားသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့မှာ -
အသုံးပြုသူများသည်ဤ USB ကိရိယာအားကွန်ပျူတာနှင့်စနစ်တကျအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပရိုဂရမ်များ (သို့) ဖိုင်များတွင်ဤသို့ရှိသည် ကွန်ပျူတာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဤ drive တွင်အမှားများတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိုဖြေရှင်းပါ
မင်း message ပေါ်လာတာနဲ့ "X" ကိုစစ်ဆေး (သို့) ပြုပြင်လိုပါသလား။ ဤ ၀ င်းဒိုးကိုမပိတ်ပါနှင့်“ စစ်ဆေးပြီးပြုပြင်ပါ (အကြံပြုသည်)” ကိုနှိပ်ပါ။
Windows ကို 10 အမှားများကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ခဏအကြာတွင် Windows 10 ကို ပြန်လည်စတင်ပြီး error ဖြေရှင်းပြီးကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
Windows 10 နှင့်စစ်ဆေးစဉ်အမှား
Windows 10 သည်သင်အားပြင်ပသို့လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်လျင်မြန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်စေသောအတည်ပြုကိရိယာတစ်ခုပေးသည် hard disk ဒါမှမဟုတ် USB stcik ကိုစစ်ကြည့်ပါ။
ကိုဖွင့်ပါ Windows Explorer ကို ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းကိုသုံးလျှင်အလွယ်ဆုံး Windows ကို + E ကို drücken။
ဘယ်ဘက်တွင်အမျိုးအစားသို့ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပါ "ဒီ PC"မရ။ ချိတ်ဆက်ထားသော drive များအားလုံးကိုဖော်ပြထားပါသည်။
ဖြင့်နှိပ်ပါ ညာဘက် mouse ခလုတ် aပေါ်မှာ hard diskပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ရွေးချယ်လိုပါသည်။ "ဂုဏ်သတ္တိများ" ထွက်။
အမှားစစ်ဆေးမှု၏အလယ်တည့်တည့်မှာ "စစ်ဆေး" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကဲနှိပ်လိုက်ပါ "scan drive".
drive ကို scan ဖတ်ပါ
အတည်ပြုချက်ကာလအတွင်းသင် drive ကိုဆက်လက်သုံးနိုင်သည်။ အမှားများတွေ့ရှိလျှင်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
စစ်ဆေးမှုစတင်ပြီး Windows သည် hard drive ကိုအမှားများကိုစစ်ဆေးသည်။ အမှားတွေ့လျှင် Windows သည်အလိုအလျောက်ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။
hard drive အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ရှာဖွေမှုသည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။
Chkdsk command ဖြင့် USB ကိုပြုပြင်ပါ
မကောင်းသောဖိုင်များသည် hard drive ကိုကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။ ဤတွင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။
key ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Windows command prompt ကိုစတင်ပါ "Windows + R"
ပွင့်လင်းတင်းကျပ်မှု၌သင်အနည်းငယ်ပေးသည် chkdsk D: /f/ r / x တစ်ဦး။
ကျေးဇူးပြု၍ စာကိုဂရုပြုပါ "D" စစ်ဆေးရန်အတွက်ပြင်ပ hard drive ၏ drive letter ဖြစ်ရမည်။
၎င်းကိုပြုပြင်ရန် USB drive ကိုပြဿနာရှာပါ
Microsoft က၎င်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်သင့်စက်ပေါ်ရှိအရေးကြီးသောပြဿနာအချို့ကိုအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်။ ရရှိလျှင်၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေနိုင်သောအောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါလိမ့်မည်။ သင်အကြံပြုထားသောပြသနာများကိုသင်လိုက်နာပြီးပြဿနာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်.
Öffnen Sie သေသည် Windows ကို setting များကို. ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းကိုသုံးသောအခါအမြန်ဆုံး Windows + I ပါ ပုတ်ပါ
click ပါ Update နှင့်လုံခြုံရေး လက်ဝဲဘက်၌တစ်ခုပြီးတစ်ခု၊ ပြmbနာ
ယင်းအပေါ် ညာဘက်ပြတင်းပေါက် အပေါ်ကိုဆင်း Windows စတိုး။ လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
ဖိုင်များကိုဖျက်သောအခါ Windows 10 တွင်အမြဲကြိုတင်မေးပါ
Windows 10 တွင် Bing Search ကို Disable လုပ်ပါ၊ Search Engine ကိုဖယ်ရှားပါ
Firefox Tab Throbber ကိုပြောင်းပါ
Windows 10 ၏ lock screen lock screen များကိုပိတ်ပါ
Windows 10 အဟောင်း task manager ကိုပြန်ယူပါ
Windows Defender တွင် tamper protection ကိုသက်ဝင်စေပါ
Windows 10 activation backup restore - ဒီမှာလုပ်နည်း
desktop ပေါ်တွင် Windows 10 update shortcut
USB အမှားသတင်း Usb hard drive ပါ USB ချောင်း